Semi Auto Shopping Bag Mahine ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊ ဖြန့်ဝေသူနှင့်စက်ရုံမှ Semi Auto Shopping Bag Mahine အကြောင်းသင်သိရန်လိုအပ်သည်။
ပုံစံ - SFM-220P
SEMI-အလိုအလျောက် Patch လက်ကိုင်
လွယ်ကူသောထိန်းချုပ်မှုနှင့် လုပ်ဆောင်ချက်အားလုံးအပြင် စက်အခြေအနေအားလုံးကို ရှင်းလင်းပြသရန်အတွက် HMI ကို ထည့်သွင်းထားသည်။.
လုပ်ဆောင်ချက်ကတော့ အလိုအလျောက် ပါဝင်ပါတယ်။,တစ်ခု-အချိန်စက်ဝန်း,manual လည်ပတ်မှု,ရေတွက်ခြင်း။/အချိန်ထိန်းချုပ်မှု...
လုပ်ငန်းစဉ် သိမ်းဆည်းခြင်းနှင့် လွဲမှားခြင်းများကို ရှောင်ရှားခြင်း။-တံဆိပ်ခတ်ခြင်းဖြင့် လည်ပတ်နိုင်သည်။&စင်ပေါ်တွင် ထိုးကြိတ်ခြင်း.
အထက်ပိုင်း&HDPE အတွက် သင့်လျော်သော အနိမ့်တံဆိပ်ကို အသီးသီးချိန်ညှိနိုင်သည်။,LDPE နှင့် LLDPE.sealing pressure လည်း ထို့အတူပါပဲ။.
၀တ်ရုံနှင့်.25MPa လေဖိအားပေးဝေမှုနှင့် 0.6~1 စက္ကန့်,အထူးလေဟာနယ်အိတ်အဖွင့်ယန္တရားသည် အဖွင့်၏ထိရောက်မှုကို အားကောင်းစေပြီး ဘယ်သောအခါမှ ပျက်ကွက်နိုင်သည်။.
အလုပ်စားပွဲတွင် X နှင့် Y ဝင်ရိုးများကို3စက္ကန့်အတွင်း လွတ်လပ်စွာ ချိန်ညှိနိုင်သော positioning ruler တပ်ဆင်ထားသည်။.
2 ပုဒ်ဖြင့် ပြန်ကြည့်ခြင်းဖြင့် အချိန်ရနိုင်သည်။-မိခင်လိပ် အပြောင်းအလဲအတွက် ချွေတာရေး,အချိန်အတောအတွင်း,၎င်းသည် single film roll ၏ အတွင်းနှင့် အပြင်ဖလင်လိပ်များကြောင့် ဖြစ်ပေါ်သည့် အလျားကွာခြားမှုကိုလည်း ဖြေရှင်းနိုင်သည်။.
ပစ္စည်းထောက်ပံ့မှုမရှိသည့်အခါ ဘက်စုံသုံးအချက်ပေးစနစ်သည် အလုပ်လုပ်သည်။,ပုံမှန်မဟုတ်သောအပူချိန်&လေဖိအားပေးဝေမှုနှင့် လက်လှမ်းမီမှု စသည်တို့ကို ရေတွက်ခြင်း၊.
မော်ဒယ် အိတ်အရွယ်အစားပြုလုပ်ခြင်း။(မီလီမီတာ) အိတ်အမြန်နှုန်းကိုပြုလုပ်ခြင်း။
(စက္ကန့်./အိတ်) Air Supply လိုအပ်ပါသည်။ အပူပေးနိုင်စွမ်း
အရှည် အကျယ် အထူ
HDPE LDPE HDPE LDPE HDPE LDPE ဌ. ဒဗလျူ. ဇ.
Mpa 250L/မိ စုစုပေါင်း:
၁.6 KW 1.7 KW 1.8M 1.52M 1.35M
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.carrybagmachine.com/my/semi-auto-shopping-bag-mahine-1.html
SHENG-FON PLASTIC MACHINE CO., LTD. အကောင်းဆုံးကိုဦးဆောင်ထုတ်လုပ်သူ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းနှင့်တင်ပို့သူဖြစ်ပါသည် Semi Auto Shopping Bag Mahine in Taiwanဤမြေကွက်၌အတွေ့အကြုံ .Years ကျနော်တို့အရည်အသွေးနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်ဝေါဟာရ၌အကြှနျုပျတို့၏ကုန်ပစ္စည်းများအပြိုင်အဆိုင်များစေနိုင်ရန်အတွက်သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးကိုဆက်လက်။ အများဆုံးဈေးမှာအရည်အသွေးအမြင့်ဆုံးထုတ်ကုန်များကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အန္တိမပန်းတိုင်ပင်ဖြစ်သည်။ ဒီပန်းတိုင်ကိုနိုင်ဖို့အတွက်ကျနော်တို့အဆင့်မြင့်အပြောင်းအလဲနဲ့ပစ္စည်းကိရိယာများစတင်မိတ်ဆက်ကြပါပြီဟု, ထုတ်ကုန်တစ်ဦးသည်အလွန်မြင့်မားတိကျမှန်ကန်မှုကိုထိန်းချုပ်ထားသည်။ သင်တို့သည်ငါတို့၏ထုတ်ကုန်နှင့် ပတ်သက်. မည်သည့်မေးခွန်းမေးစရာရှိပါကထိုကြောင့်, သင့်ကိုငါတို့ပြောပြနိုင်ပါတယ်။ ငါတို့ကဲ့သို့အမြန်ဆုံးသကဲ့သို့သင်တို့ကိုအဖြေပေးလိမ့်မည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ website သွားရောက်ကြည့်ရှုမှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကြောင်း pround များမှာ
ဂုဏ်သိက္ခာရှိသောအဆောက်အဦ၏ကျယ်ပြန့်မှာကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကိုအသုံးပြုခြင်းတွင်ရှိနေကြသည်နှင့် events.Their ကြော့ apprearance သင့်အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့လှုပ်ရှားမှုမှထားတဲ့ add ဖြစ်ပါတယ်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်အဘို့အကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်အခမဲ့ခံစားပေးပါ။
Fully Auto Bottom Seal Shopping Bag စက်
အကောင်းဆုံး Semi Auto Shopping Bag Mahine ကိုရှာဖွေရန်နှင့် ၀ ယ်ရန်အတွက်သင်သည် Semi Auto Shopping Bag Mahine မှထုတ်လုပ်သော၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊ Taiwan ရှိစက်ရုံတစ်ရုံ
Multi Function Side Sealing Shopping Bag စက်